NordVPN Netflix (2020) - Jereo izao any ivelan'i Etazonia miaraka amin'ny mora! - Ahoana No
Netflix dia zavatra maro amintsika no tsy afaka miaina tsy misy, fa ny mampalahelo dia rehefa tsapanao fa betsaka kokoa ny Netflix, izay tsy azonao idirana noho ny fetran'ny mpizara.Ianao ve mitady a VPN handefa an'i Netflix ? Te hividy VPN fa miandry fihenam-bidy? Eny eny, eo amin'ny toerana mety ianao avy eo satria nahazo anao ny tsara indrindra VPN rehetra izahay satria mila izany koa ny Netflix, miaraka amina fihenam-bidy tsy mampino.
NordVPN dia VPN haingana sy azo antoka izay mitazona anao handeha amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny Netflix ary manampy anao hijery soa aman-tsara nefa tsy hahatsapa fa mitete haingana. Izahay dia namorona torolàlana tena tsara ho anao hitaky fihenam-bidy mahafinaritra sy fahalalana-fomba ahafahanao mampiasa NordVPN ho an'ny Netflix.
NordVPN ho an'ny Netflix - Dingana fitakiana fihenam-bidy NordVPN
Ny fihenam-bidy dia zavatra tiantsika rehetra; iza no tsy te-hihary vola amin'ny fividianana. Raha mitady VPN izay manome fihenam-bidy mahafinaritra ianao, dia eo amin'ny toerana mety. Hitety anao amin'ny fomba ahafahanao mitaky fihenam-bidy tena tsara amin'ny fividianana NordVPN izahay.
Tsy toy ny VPN maro izay manolotra kaody coupon sy rohy fihenam-bidy izay sarotra zahana ary tsy ara-dalàna, NordVPN dia manolotra fihenam-bidy mahafinaritra ho an'ny mpanjifany amin'ny tranokalan'izy ireo ofisialy.Raha te hahalala bebe kokoa dia araho ny dianay.
Dingana 1: Mandehana mankamin'ny tranonkala ofisialin'ny NordVPN.
kitiho eto alefa any amin'ny tranokala ofisialin'ny NordVPN, ahafahanao miditra amin'ny drafi-bidiny. Azonao atao ihany koa ny mizaha ny tranonkalany hahalalanao ireo fiasa misimisy kokoa sy fampahalalana hafa momba ny NordVPN.
Dingana 2: Fakafakao ny drafitra sy ny fihenam-bidy.
Tsy hanampy anao ny fisafidianana drafitra an-tsokosoko miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara; mila misafidy tsara programa iray izay manome anao izay ilainao ianao ary manolotra fihenam-bidy betsaka ho anao. Manana drafitra maromaro misy izy ireo ary azonao zahana izany amin'ny alalàn'ny fipihana eto .
Dingana 3: Misafidiana drafitra tianao.
Manana fihenam-bidy hatramin'ny 68% izy ireo; safidio ny drafitra manome tombony lehibe indrindra anao ary atombohy amin'ny famitana ny fandoavam-bola amin'izany.
Dingana 4: Fandoavana
Ampidiro ny antsipirihanao toy ny anarana, adiresy mailaka, ary ny antsipiriany momba ny fandoavam-bola amin'ny fandoavanao vola, ary hasaina ianao hankafy fihenam-bidy mahatalanjona amin'ny NordVPN.
Manantena izahay fa nampifaly anao tamin'ny fanomezana anao fitsangatsanganana momba ny fomba ahafahanao mitaky fihenam-bidy tena tsara. Manohiza mamaky hahalalanao ireo tombony hafa tafiditra ao amin'ny NordVPN izay misy ny fivezivezena Netflix sy maro hafa.
Ahoana ny fomba hijerena an'i Netflix miaraka amin'ny NordVPN?
Tsy misy ezaka ny mijery Netflix miaraka amin'i NordVPN. Raha vantany vao nampiasa ny kaody fihenam-bidy izahay ary nisoratra anarana tamin'ny NordVPN, dia hapetraky ny VPN amin'ny rafitrao izany.Vantany vao apetraka dia ampidiro ny mari-pahaizana fidirana hahafahanao manomboka amin'ny NordVPN.
NordVPN dia manana mpizara mpampiasa mora be ho anao hahafantarana ny fomba fampiasana ny VPN.Ny pejin'izy ireo lehibe dia manana famonoana mpamono olona fatratra, alefaso izany ary hanomboka mandeha ho azy ny VPN-nao. NordVPN dia manome ny mpampiasa azy karazan'isa misy fisian'ny server ahafahan'ny mpampiasa misafidy. Tokony hizaha toetra ny mpizara ianao ary hizaha izay mpizara manome anao fidirana sy haingam-pandeha ho an'ny streaming.
Amin'ny fisafidianana ny mpizara tsara indrindra ho anao dia afaka miditra mora foana amin'ny Netflix ianao ary tsy misy ahiahy mihitsy. Stream tsy voafetra nefa tsy miaina ny fanapahana hafainganam-pandeha na fanelingelenana fotsiny amin'ny NordVPN.
Fa maninona no manakana ny mpamatsy VPN i Netflix?
Raha mpampiasa Netflix efa misy ianao dia efa fantatrao fa mametra ny mpampiasa hijerena votoaty misy azon'izy ireo jerena amin'ny faritra iray manokana i Netflix. Ny ohatra tsotra indrindra dia ny tsy fisian'ny Netflix UK dia aseho amin'ny Netflix US, ary ny tsy fahampian'ny Netflix US dia mampiseho amin'ny Netflix UK,Mpampiasa maro no manandrana manafina ny adiresy IP misy azy amin'ny VPN ary manandrana miditra amin'ny Netflix, saingy manana protokol fiarovana azo antoka izy ireo izay tsy mamela ny VPN hiditra ao anaty atiny.
Ity no antony lehibe indrindra tsy ahafahanao mivezivezy amin'ny VPN amin'ny Netflix.Raha te handefa Netflix amin'ny VPN ianao dia aza manahy. NordVPN no vahaolana tokana amin'ny olanao.
Maninona no mifidy NordVPN hiditra amin'ny Netflix?
NordVPN dia VPN azo antoka, azo antoka ary haingana be, miaraka amin'ny fanampian'izany izay tsy mila miahiahy mihitsy momba ny fanelingelenana. Azonao atao ny mizaha, mivezivezy, miasa maimaimpoana
VPN misongadina izao mifaninana amin'ireo tia Express VPN sy VPN ambony hafa eo amin'ny tsena. Ny antony lehibe mahatonga anao mankany NordVPN dia ny fahazoana miditra sy mpampiasa interface tsara. Tsy ho tsapanao akory fa misy VPN mandeha ao aoriana; hilamina ny zava-drehetra.
NordVPN dia manana toerana mpizara manan-danja izay azonao isafidianana ary arakaraka ny fahafaham-ponao ary ankafizo ny fitetezana tsy misy ahiahy. Saingy tsy ny toerana misy ny mpizara ihany no mahatonga an'i NordVPN ho VPN tsara; saron'izy ireo am-pahombiazana ny adiresy IP anao amin'izay tsy misy zavatra azo tsoahina na alefa aminao.
Ankoatr'izany, NordVPN dia manana fiasa an-taonina izay tsy maintsy fantatrao alohan'ny hanombohanao mampiasa ny fampiharana. Andao jerena ireo fiasa tena tsara namboarina mba hahatonga ity VPN ity ho tsara indrindra.
Antoka famerenam-bola 30 andro
Mety tsy nanana fitsarana maimaimpoana izy ireo, saingy anisan'ireo VPN ambony mino izy ireo fa tokony hisy vidiny ny fitsapana; manolotra antoka azo antoka amin'ny famerenam-bola amin'ny drafitr'izy ireo izy ireo. Raha tianao ny VPN, azonao atao ny mampiasa azy. Raha tsy izany dia azonao atao ny mitaky famerenam-bola ao anatin'ny 30 andro.
Ny VPN tsara dia mila fanaingoana mahery mba ho azo antoka ho an'ny mpampiasa sy hiaro ny tahirin-kevitra rehetra. NordVPN dia miaraka amina encryption AES 2048-bit ho an'ireo mpampiasa azy izay manome anao fiarovana farany.
Politika hentitra tsy misy log
Ny VPN iray izay manara-maso ny angon-drakitrao dia afaka mampiasa azy io foana, na mety misy mangalatra sasany mangalatra ny angon-drakitrao. Ity no ahafahan'ny VPN manana politika tsy misy kitay henjana azo ampiasaina; hanampy anao ho azo antoka izany satria tsy misy ny data na ny rakipeonao raketina; azo antoka ny mombamomba anao. NordVPN dia manaraka ihany koa ny politika hentitra amin'ny No-logs.
Bandwidth tsy voafetra
Ny fantsom-pifandraisana dia ny fahafahantsika hiasa; raha ny amin'ny NordVPN dia manana fantsom-pifandraisana tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa izy ireo izay atolony ny mpampiasa azy
Fanohanana ho an'ny mpanjifa 24/7
Ny VPN tsy misy fanohanan'ny mpanjifa dia tsy misy ilana azy na iza na iza. Mety hisy hihevitra tokoa fa tsy mila fanohanan'ny mpanjifa izy ireo, saingy fantatsika rehetra, ny fiasana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa dia mitaky filana olana lehibe kokoa koa eo an-toerana. Miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa 24/7 an'ny NordVPN dia manana olona nahazo ny lamosinao foana ianao,
Ny famonoana Kill dia tsy maintsy asongadina ankehitriny amin'ny VPN. Ilaina izany satria tsy maninona na miatrika fidinan'ny tambajotra ianao na fianjerana amin'ny rafitra na olana ara-teknika hafa, dia hifandray ny VPN raha mbola eo ny famonoana mpamono olona.
Tianay foana ny rindrambaiko izay mora ampiasainay, mora takarinay ary tsy mieritreritra be loatra. NordVPN dia VPN malaza iray izay tena sariaka amin'ny mpampiasa, ary tian'ireo mpampiasa hampiasa azy io amin'ny filany rehetra.
Andramo NordVPN maimaim-poana hampiasana Netflix:
Isaky ny te-hahazo zavatra isika, dia hitantsika raha afaka mitsapa azy maimaimpoana isika. VPN maro no manolotra fisedrana maimaim-poana, fa raha ny amin'ny NordVPN dia mino ny karama sy ny fitsapana izy ireo. Izy ireo dia manana antoka miverina amin'ny laoniny 30 andro ho an'ny mpampiasa azy ireo.
Raha hitaky ny antoka azo antoka, ianao dia tsy maintsy mividy ny drafitr'izy ireo amin'ny pejy ofisialy momba ny vidiny. Misokatra ny tetikadin'izy ireo hitaky ny antoka azo antoka.
Zahao ny politikan'ny vidiny raha te hahalala bebe kokoa momba ny fepetra sy ny fiantohana ny vola 30 andro.
Ny vidin-javatra dia singa iray manan-kery tokoa rehefa misy fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Raha mahazo zavatra amin'ny vidiny lafo ianao, ka mahatonga ny entana ho mendrika isaky ny denaria, dia azo antoka fa handeha ianaoNy vidiny dia singa iray mety hanova ny sain'ny mpividy. Raha manana vidiny manintona ianao, tsy misy afaka manakana ny entanao tsy hivarotra haingana.
Ny VPN dia manana elanelam-bidim-bidy isan-karazany amin'ireo fiasa hafa arosony. NordVPN dia manana ny laharam-bidiny ho telo, ny drafitra isam-bolana, ny drafitra isan-taona ary ny drafitra roa taona.Ny drafitra isam-bolana dia amin'ny vidiny sahaza azy tanteraka, voafetra amin'ny $ 11.95 isam-bolana, azonao atao ny mampiasa sy mandoa izany isam-bolana. Somary lafo izany raha oharina amin'ny drafitra isan-taona sy roa isan-taona, fa raha te hanandrana ianao dia tohizo.
Ny drafitra isan-taona dia mitentina $ 4,92 isam-bolana. Afaka mamonjy 58% amin'ity drafitra ity ianao. Ny volanao dia $ 59 isan-taona monja ary manome tombony anao amin'ny vidiny mampihomehy. Saingy, ny drafitra malaza indrindra dia ny drafitra 2 taona izay misy tahiry avo indrindra ho an'ny mpividy.
Ny drafitra 2 taona dia mitentina $ 3,71 isam-bolana, mitotaly hatramin'ny $ 89 mandritra ny roa taona voalohany. Ny tahiry dia totalin'ny 68%. Tsy mahagaga ve izany? Ity dia drafitra tena soso-kevitra, ary heverinay fa tsy maintsy mandeha amin'izany ianareo.
1Q. Hiaina ny haingam-pandeha any NordVPN ve aho amin'ny streaming Netflix?
taona:Ny filatsaky ny hafainganam-pandeha dia zavatra manjaka amin'ny VPN izay tsy azo ihodivirana. Mba hahazoana ny traikefa tsara indrindra amin'ny streaming, dia tsy maintsy misafidy mpizara mety ianao hanampy anao handamina streaming amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa.
2Q. Manolotra fitsarana maimaimpoana ve i NordVPN?
taona:Ny andrana maimaimpoana dia efa lany andro ankehitriny satria ny ankamaroan'ny VPN dia mandeha amin'ny politikan'ny karama sy ny fitsapana. NordVPN dia manana antoka famerenam-bola maharitra 30 andro ahafahanao mitaky famerenam-bola 100% amin'ny fividiananao ao anatin'ny 30 andro.
3Q. Azoko atao ve ny manafoana ny famandrihako NordVPN amin'ny fotoana rehetra?
taona:Raha hitaky famerenam-bola dia tsy maintsy foanananao ny famandrihana alohan'ny 30 andro, raha tsy izany dia tsy maintsy mampiasa ny VPN ianao mandra-pahatongan'ny andro nisoratra anarana.
Tsy misy isalasalana fa NordVPN dia VPN faran'izay tsara izay mamela anao hitanjozotra miaraka amin'ny Netflix miaraka amin'ny fihenam-bidy lehibe amin'ny fividianany.NordVPN dia mitombo, ary toy izany koa dia hanampy anao hivoatra eo am-piarovana anao sy hampiroboroboana fitetezana azo antoka ho anao. Manantena izahay fa manana hevitra mazava momba ny fomba ahafahanao manararaotra ny fihenam-bidy tena tsara.
Fandehanana mankany VPN ho an'ny filanao Netflix rehetra. Raha mila fangatahana misimisy kokoa momba ny fihenam-bidy NordVPN sy NordVPN ho an'ny Netflix, aza misalasala manontany anay amin'ny boaty chat eto ambany. Azonao atao koa ny manome anay ny hevitrao sarobidy sy ny sosokevitra marina.
Mety ho tianao koa ny mamaky:
Kaonty Netflix maimaim-poana
Fahadisoana Quantum - Izay rehetra fantatsika hatreto
kaody hadisoana roblox "279"
roblox fehezan-dalàna mozika ho an'ny havana
tranonkala handefasana sarimihetsika maimaim-poana nefa tsy mpikambana
www.youtube-mp3.org mpanova mp3
afaka mandefa tsy misy wifi ve aho